वर्षाको व्यस्तता - मनोरञ्जन - नेपाल
खेल्न त वर्षा सिवाकोटीले आधा दर्जन फिल्म खेलिसकिन् । तर, के गर्नु ? सफलता सधैँ टाढै रह्यो । पशुपतिप्रसाद हिट भयो, जसजति सबै खगेन्द्र लामिछानेले पाए । कारण, वर्षा सहायक भूमिकामा सीमित थिइन् । उनले आशा राखेका कारखाना र लप्पनछप्पन लगातार फ्लप भइदिए । यसले स्वाभाविक रुपमा वर्षाको करिअरमा खडेरी लाग्यो । नयाँ हिरोइनको आगमनले उनी सदाका लागि छायामा पर्ने हो कि भन्ने संशय भइरहेका बेला वर्षाले फेरि रफ्तार लिएकी छन् । भैरेको सुटिङ भ्याउनासाथ नयाँ फिल्म रानी महलमा अनुबन्धित भएकी छन् । यस फिल्मकी एकल हिरोइन हुनुको नाताले पनि उनमा उत्साह बढेको छ । तर, यही उमंग रिलिजपश्चात् पनि कायम रहला ? समयले नै बताउला ।
हसाउँछ, बाँकी केही छैन
दुई हिरोको मित्रता
फ्रेन्च निर्देशकको नेपाली नाटक